Inkabadan 70 Qof Oo Suuriya Lagu Dilay iyo Mujaahidiinta oo deeganano Qabsaday.
Saturday June 21, 2014 - 12:15:08 in Wararka by Super Admin
Khasaara xooggan ayaa cadawga Nuseyriga ah kasoo gaaray weerar istish-haadi ah oo lagu beegsaday saldhig ciidan oo kuyaal magaala xamaah ee wadanka suuriya.
Dabaabad ay ku dagaalamayaan xoogaga ISIS
Warbaahinta ku hadasha afka xukuumadda ayaa sheegtay in 34 qof ay dhinteen 50 kalane dhaawacyo so gaareen kadib markii gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay lagu qarxiyay goob ay askar cadawga katirsan iyo dad nuseyriyiin ah ku sugnaayeen.
Tobaneeyo qof ayaa ku dhimatay wadanka Suuriya kadib duqeymo ay geysteen diyaaradaha dagaalka xukuumadda Nuseyriga Bashaar al-asad.
Wararka ka imaanaya wadanka suuriya ayaa sheegaya in tobaneeyo qof ay ku dhinteen xasuuq hor leh oo ciidamada xukuumadda dabadhilifka Bashara al-asad ay ka geysteen waqooyiga iyo Koonfurta wadankaasi.
Ugu yaraan 50 qof ayaa lagu dilay magaalada Xalab ee dhacda xad beenaadyada ay wadaagaan wadamada Suuriya iyo Turkiga diyaaradaha miigaga ayaa baraamiil walxaha qarxa ah ku garaacay xaafado xalab katirsan waxaana lasoo sheegayaa dhimashada tobaneeyo qof.
inkabadan 5000 oo qof ayaa sanaddii lasoo dhaafay duqeymo diyaaradeed ugu geeriyootay gobolka xalab halka sawaariikhda iyo madaafiicda goobta ay adeegsadaan ciidamada nuseyriyadda ay ku dhinteen dad kabadan 100-kun oo qof.
Dhinaca kale ciidamada mujaahidiinta dowladda islaamiga ayaa weerar ku qaaday degmada Alsufeyra ee gobolka xalab halkaasi oo ay ku suganyihiin ciidamada cadawga.
Sidoo kale dagaallo ayaa lagasoo sheegayaa gobolka deyruzuur duqeymo ba’an ayay ciidanka ISIS ku qaadeen garoonka diyaaradaha magaalada Alqaamishli ee xarunta gobolka Xasakah.